Zinto Ukuba Kunokwenzeka Xa Kufuneka Ahlangane Elungileyo Guy Emva Toxic Budlelwane Wayecinga Catalog
Xa ufaka kwi toxic budlelwane wena musa baqonde indlela kakhulu i-yeemvakalelo zakho kakubi impacts kuwe. Hayi xa nisolko kuyo ubuncinane. Xa usenza izinto ngendlela toxic budlelwane, yonke into malunga kubalulekile uhlobo addicting. Oko ke ukwazi kwaye engazi kakuhle ngubani oza kunokwenzeka. Oko ke ithemba ukuba kwikhulu izakubangela tshintsha kodwa kukho kanjalo intuthuzelo kwi-izinto zikakesare efanayo. Kukho intuthuzelo kwi umntu ufuna ukwazi ngoko ke kulinywa nzulu. Kwaye kuthatha yonke into kwi nani hayi hambani kude. Kwaye nkqu xa ufuna ukuhamba kude, ufuna ukufumana ngokwakho ke emva ngoko ke, amaxesha amaninzi ngenxa yokuba unobuhle kuye. Ngaba unobuhle i-adrenaline rush obukhulu ngamandla emotions. Ukususela ndiyakuthanda screaming ukuba ukwenza phezulu. Kodwa ke ukuba ahlangane elungileyo guy. Kwaye xa ukuba kwenzeka ntoni ke xa kufuneka baqonde indlela kakubi lo elidlulileyo budlelwane sele ezichaphazelekayo kuwe. Kwaye ngamanye amaxesha nani nkqu tyhala abantu kude ngenxa kuyo. Emva toxic budlelwane, wena musa trust nabani na. Nkqu ngokwakho. Nina nimangaliswe njani tolerated enjalo budlelwane kuba ngoko ke, ixesha elide. Kwaye kufanele ufake wonke budlelwane ilindele i-eyona imbi umntu. Ixesha elithile, wena musa kukholelwa okulungileyo guys ingaba zikho. Ngenxa kuba ngoko ke ixesha elide kufuneka wajonga kuba ezingachanekanga qualities kwaye wamkele ezininzi aba bantu abo asikwazanga deserve kuwe. Ucinga ukuba wonk ubani motives okanye akuthethi ukuba zithetha oko kuthi. Xa ufuna anayithathela ibambe umntu kwi-lies kaninzi lenza kuwe paranoid njengoko fuck. Wena musa kukholelwa abantu kusenokuba honest okanye zithetha oko kuthi. Ufuna ukwenza andwebileyo assumptions kwaye ukuthandabuza ngenene okulungileyo abantu nje ngenxa omnye umntu. Olandelayo nto uyazi wena ukuba ocacisa ukuba le guy njani onalo kule elokugqibela yakho intloko waza wathi ke baffled. Hayi ngenxa yokuba anayithathela questioned kuye kodwa ukuba umntu ethe wenza nani ngale ndlela kwaye zonke yena ufuna ukwenza ngu imigca ethe oku. Umntu treating ngaba oku koko sele onayo ukuba abe kakhulu okulungileyo ukuba abe yinyaniso. Nisolko ilindele ezinye shoe ukuba uyeke. Nisolko ilindele kuye oza kuphulukana nayo ke ngenye imini. Nisolko ilindele abanye abrupt iphelisa ngaphandle closure. Kodwa yonke imihla wenza nje ungqina ukuba kuwe yena ke onjalo umntu lowo ke sele ukususela ukuqala. Yena ke, ndakunika akukho isizathu umbuzo kuye, kodwa ke ayi kuye wena musa trust ke wonke umntu kwixesha elidlulileyo. Umntu kwixesha elidlulileyo sele ekhokelwa ukuba bakholelwe wena musa deserve eyona. Ngoko ke, xa ufuna ukufumana oko ufuna ukukhuphela ngaphandle kwayo. Ngaba ukoyika into elungileyo ngenxa yokuba musa ufuna kuphulukana nayo kuyo. Wena musa ufuna ukufumana kwenzakalisa kwakhona ngoko ke uzama kwaye ruin kuya kuqala. Kodwa yintoni uyakuqaphela ukuba ke ezahlukeneyo malunga le guy xa uyabaleka, wathi, nokususa kuwe. Xa ufuna tyhala kuye, wathi, hlasi kufuneka uvale kwaye hayi makhe ushiya.
Kodwa endaweni yoko, yonke into efumana wathetha phandle kwaye wachaza. Kwaye kukho le iliza ka-intuthuzelo emva koko kwaye kufuneka baqonde eqhelekileyo abantu musa ukushiya yesibini into uyaya ezingachanekanga. Yena ke oza nimangaliswe kutheni ufuna apologize kaninzi okanye yintoni nisolko esithi uxolo kuba. Uya kuyibona intlungu emehlweni enu ukusuka umntu kwixesha elidlulileyo abantliziyo made kuwe umbuzo ngokwakho. Uya kuyibona intlungu entliziyweni yakho izama ngoko ke nzima ukuthanda kwakhona xa ufuna anayithathela kuphela ezaziwayo heartbreak. Kwaye yena u-oza constantly reassure wena yonke into kulungile. Xa elungileyo guy uthanda umntu, abo yaphukile othe kuphela ezaziwayo toxic budlelwane nabanye, ngubani lowo ingaba ngu ukufundisa wakhe yena asikwazanga deserve nantoni na yena onayo. Yena redefines ezi horrible imigangatho yena sele, kwaye lowo ukuphenjelelwa kuba ngaphandle kwabafundi. Ucinga ukuba bamele bhetele ngaphandle ngaphandle kwenu kodwa inyaniso kukuba nje abayenzileyo ubomi bakho ngcono iyagqitha pha zombini iindlela. Kwaye ndiyazi ukuba ukhe ubene scared ukuba uthando kwakhona. Ndiyazi ukuba ukhe ubene besoyika ukuba vumelani nabani na ukuba vala. Kodwa yakho, ukujikeleza.
Yakho ukomelela kwaye ukuqonda kunye nokungabikho isihlalo kuwo wonke umntu ufumana ntoni yenza wena elimnandi. Kwaye xa ekugqibeleni get ethambileyo kwaye yamkela obu budlelwane ungumnini ke uthando lo mntu nayo yonke into kufuneka ndihlale kuni. Kodwa musa zama kakhulu nzima.
Musa ukuba kufuneka
Kwixesha elidlulileyo, ngaba bafundiswa yakho eyona ayi okulungileyo ngokwaneleyo. Ngoko ke, ngaba kwafuneka zama kakhulu nzima.
Ngaba kwafuneka compete
Ngaba kwafuneka kuvavanya ngokwakho. Kukho izakuba a mzuzu apho umxelele le guy yonke into ke into eyenzekayo. A mzuzu uthembe kuye ukuba mvumeleni ukuba vala. Kwaye xa wena umxelele malunga elidlulileyo kwaye abantu abathe kwenzakalisa wena into uzakufumana ayi ke yena ke oza kuthatha ngaphandle. Ngu-yamnika isizathu hlala. Ndiyazi umntu yakho elidlulileyo wafundisa kuwe malunga nangona sikwimeko yoqoqosho enzima uthando. Bafundisa kuwe vulnerability bubuthathaka. Ngaba anayithathela kokuba abe nomdla kuba ngoko ke ixesha elide kwaye anayithathela kwafuneka banyamezela ezininzi zinto kuni asikwazanga deserve. Kodwa konke oko lwenze kuwe ngaphezu beautiful kunokuba uyazi. Kwaye yonke kuya kwenza ilungelo umntu appreciate kuwe kuba ukoyisa zonke kuyo. Kwaye kunye tears emehlweni enu nkqu uza kuba ngako oko kuba toxic budlelwane ukuba asikwazanga ukunitshabalalisa kodwa ngenye made kuni olomeleleyo mntu ungumnini namhlanje. Uqale ukwazi ukuba ubudlelwane ukuba esetyenziswa ukuchaza yakho esezantsi luthando kwaba ngoko kude real nto. Kufuneka bafunde ukuba uthando isn t nicinge ukuba uza kwenzakalisa okanye kuba demeaning. Uthando isn t nicinge ukuba waphula intliziyo yakho nje ukwakha kuwe emva phezulu. Uthando ayikho into ukuba iza ukwimo jealousy. Nokuba yayo s ukwenza kuni onomona okanye ekubeni onomona kuni. Ilungelo uhlobo uthando akusebenzi ukudlala imidlalo kunye intliziyo yakho okanye ufuna ukubona kuwe ngendlela intlungu. Phantsi kwaye umxholo ngenxa yam uluhlu olutsha incwadi inikwe iphenjelelwe yi-ingcamango ka-kintsugi. Yonke loo nto onzulu okanye cracked ngaphakathi kuthi sele umthamo ukuba abe osisigxina, kuzaliswa kukukhanya. Sisebenzisa zange alaphukanga. Sisebenzisa rhoqo wokuba
← China Dating
Free incoko ngaphandle yobhaliso ye-intanethi dating kwaye chatting →